Lakandranon’Andriantany Nodiovin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra
Fisotroan-toaka lava Mahavoa ny « Cirrhose du foie »
Mahavoa ny « Cirrhose de foie » ny fisotroan-toaka lava, hoy dokotera Fidy Bariniaina.
Ady amin’ny fahajambana Ifandrombahana ny fitiliana maso maimaimpoana
Mahatratra 20.000 Ar ankehitriny ny saran’ny fijerena maso eny anivon’ny mpitsabo. Vitsiana ireo manana fahafahana ny hanao izany, indrindra fa ho an’ireo efa mitondra solomaso.
Hafanana manevokevoka Mampiakatra Tosidra tampoka, mahafanina
Tsy misy izay tsy mikolay amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro eto amintsika ny rehetra amin’izao. Mafana be tampoka indraindray, avy ny orana, mangatsiaka… Ilay hafanana be no tena mampitaraina ny maro, indrindra amin’ny antoandro. Aretina tsy ampoizina maro no aterany amin’ny ankapobeny toy ny fiakaran’ny tosidra tampoka izay vao avy nahafaty mpitarika sarety am-perinasa teny Anosibe ny herinandro teo, ny aretin’andoha, ilay fanina tampoka, maloiloy.
Ady amin’ny aretina SIDA Ny 70 %-n’ny tobim-pitsaboana no efa misy fanaovana fitiliana
Ny 0,2% amin’ny vahoaka Malagasy no efa mitondra ny tsimokaretina SIDA ankehitriny, raha araka ny tarehimarika navoakan’ny ONU SIDA tamin’ny taona 2016.
Ady amin’ny pesta Nanome 2 tapitrisa dolara ny Amerikanina
Nambaran’ny ambasadaoro amerikanina Robert T. Yamate omaly ny fanomezan’ny tahirim-bola natokana ho an’ny hamehana ao amin’ny Sampandraharaha Amerikanina ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID),
Nirotsaka an-tsehatra nanadio mivantana ny lakandranon’Andriantany mandalo etsy Ankadimbahoaka omaly, ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) notarihin’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana mivady.
Nampiasan’izy ireo ilay fitaovana raitra sy manara-penitra hahafahana misikotra ireo karazana fako manentsina ity lakandrano ity mihitsy izany hisorohana ny tondra-drano mety hitranga mandritra ny fotoam-pahavaratra. Nanentana avy hatrany ny mponina eny Ankadimbahoaka Ramatoa Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana hanaja ny fahadiovana sy ho saro-piaro amin’ny asa vitany. Mendrika ny hiaina amina tanàna madio mantsy ny mponin’Antananarivo, hoy izy izay nomarihiny fa tsy hijanona ho an’ireo mponina eny Ankadimbahoaka ihany fa hiitatra amina faritra maro. Notsindriany manokana fa hovatsiany toeram-panariam-pako ihany koa Ankadimbahoaka ary tsy andrasana isan-taona intsony ny ady hatao amin’ny pesta fa hiainana isan’andro mihitsy. Ny APIPA no manao ity asa tanterahin’ny kaominina Antananarivo renivohitra ity saingy noho ny fifampiandrasana dia noraisin’ny kaominina mivantana. Tonga nifampitafa tamin’ny vahoakan’Ankadimbahoaka teny an-toerana ny mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny tanàna Atoa Marc Ravalomanana.